XOG: Soomaaliya & Imaaraatka Carabta oo laysku geynayo, lagana shaqeynayo dhameynta Khilaafkooda.
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helay Ilo muhiim ah ayaa ii sheegay inuu socdo dadaalo diblomaasiyadeed oo ku aadan dhex dhexaadin la doonayo in laga dhex sameeyo Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, dadaaladan oo markii hore si gaabis ku socdeen, ayna ku jireen madaxda dalalka Gobolka ayaa hadda u muuqda mid soo xoogeysanaya.
Xubno ka tirsan Diblomaasiyiinta Ajnabiga ee fadhigooda yahay Muqdisho ayaa ku wajahan Imaaraadka, si ay u bilaabaan dadaalada dhex dhexaadinta ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Dawladdaha Itoobiya & Eritrea ayaa dadaal xoog badan ugu jira sidii labada dal lays kugu keeni lahaa, waxaana horey arrimaha u sameeysay dawladda Sacuudi Careebiya oo u arkaysay in ay labada dhinacba xal ka gaari karto, balse si gaabis ah ayay ku socdeen.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa xumaaday wixii ka dambeeyay khilaafka Khaliijka iyo tallaabadii dowladdii Soomaaliya bishii April 2018 kula wareegtay lacag ku dhow 10 milyan dollar oo lagu qabtay Garoonka Muqdisho, in kastoo dowladda imaaraadka ay sheetay in lacagtaasi loogu talagal mashaariic iyo mushaaraad shaqaale xoogsato ah oo ka shaqeynayey howlaha dib u dhiska, arimaha caafimaadka iyo tababaradda imaaraadka ay ka wadeen Muqdisho.
Soomaaliya ayaa hoos u dhigtay xariirka diblumaasiyadda ee ay la wadaagto dalka Imaaraatka Carabta, talaabadaas ayaana loo arkayay mid halis leh oo ay Soomaalidu ku abuuratay waxyaabo kala duwan oo iska soo horjeeda, waxaana joogitaanka Imaaraatku ay hadda ku badan yihiin maamulada Puntland iyo Somaliland.